खुट्टाको फोटो बेचेर महिनामा साढे १२ लाख ! – Satyapati
खुट्टाको फोटो बेचेर महिनामा साढे १२ लाख !
बाँके । अमेरिकाकी २२ वर्षकी युवती डिजायर गेटो एक समय रियलस्टेट व्यवसाय गरेर सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन् । यससँगै उनले साइड बिजनेसको रुपमा मोडलिङ गर्न थालिन् । यस क्रममा उनले मानिसहरुले उनको खुट्टा निकै मन पराउने थाहा पाइन् ।
बेलायती अखबार मिररमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार डिजायर इन्स्टाग्राममा निकै लोकप्रिय छिन् । इन्स्टाग्राममा उनका १.१ मिलियन फलोअर छन् । पछिल्लो समय भने डिजायर ओन्लीफ्यान्समा सक्रिय छिन् र यही अनलाइन प्लेटफर्मबाट उनले महिनामा झण्डै साढे १० हजार डलर कमाउँछिन् । यसको लागि उनले धेरै केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो खुट्टाको फोटो खिचेर पठाए पुग्छ ।
उनले अगाडि भनिन् ‘केही मासिनसहरुलाई खुट्टाको पेडिक्योर हेर्न मन पर्छ, केही मानिसहरुलाई पैतला हेर्ने सोख हुन्छ । केही मानिसहरु मेरो लागि स्टकिङ किनिदिन्छन् । केहीले मेरो खुट्टालाई स्टाइलिस मोजामा हेर्न रुचाउँछन् । खास कुरा यो हो कि यीमध्ये धेरैजसोलाई नग्नताको कुनै पर्वाह हुँदैन । खासमा उनीहरुलाई खुट्टाप्रति मात्रै लगाव हुन्छ ।’
डिजायरले आफ्ना खुट्टाको एक तस्वीरलाई सामान्यतया २५ डलरमा बेच्छिन् । उनका खुट्टाको तस्वीरका साथै भिडियो पनि चर्चामा रहन्छन् । डिजायरले खुट्टाको मसाज गर्दै गरेको भिडियो बनाउँछिन् । यसका अलावा हाइ हिल लगाएको र खोलेको पनि भिडियो बनाउँछिन् । यी भिडियोहरु पनि निकै लोकप्रिय छन् ।
डिजायरका अनुसार उनले अहिलेसम्म पनि मानिसहरु उनका खुट्टा किन मन पराउँछन् भन्ने बुझ्न सकेकी छैनन् । डिजायरका पार्टनर ४२ वर्षका छन् । उनैले डिजायरका खुट्टाको तस्वीर खिच्छन् । उनले पनि डिजायरको खुट्टा किन मानिसहरुले मन पराउँछन् भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनन् । उनलाई यसमा कुनै गुनासो पनि छैन किनकि यसरी ठूलो कमाइ भइरहेको छ ।